Gabar soomaali xijaabkeeda dartiis loogu diiday in ay maxkamada ka hadasho Dalka Canada - iftineducation.com
iftineducation.com – Haweenay Garsoore ka ah maxkamada magaalada Montreal ee dalka Canada ayaa diiday inay dhageysato dacwada haweenay muslimad ah oo Xijaaban.
Garsoore Eliana Marengo ayaa u sheegtay haweenayda Muslimada ah oo lagu magacaabo Rania El-Alloul:
Maxkamada looma ogola in dadka ay lasoo galaan darees khaldan, tusaale ahaan looma ogola in dadka ay lasoo galaan Koofiyado ama Ookiyaalayaasha qoraxda, sidaa daraadeed xijaabka aad wadato looma ogola maxkamada…”ayey tiri Garsoorahan oo cuskatay xeerka 13aad ee Maxkamada. Walow xeerkaasi uu qorayo oo kaliya:
[Qofka Maxkamada hor Imaanaya waa inuu si asluubeysan u labisan yahay]
Haweenayda Muslimada ah ee lagu magacaabo Rania El-Alloul ayaa sheegtay inay tahay qof muslim ah isla markaana xijaabkeeda xaq uleedahay.
Rania El-Alloul ayaa maxkamada u timid dacwad la xariirta Gaarigeeda oo uu caymiska ka qaatay oo dooneysay in dib loogu soo celiyo, balse waxaa la yaab ku noqday murranka ka dhex dhashay haweenayda Garsooraha ah iyo iyada intaanba maxkamada furmin.
Laba mid kala dooro. Inaan maxkamada dhageysigeeda dib u dhigo oo aad Qareen qabsato ama inaad iska furto Xijaabka…”ayey Garsooraha lasoo istaagtay.
Maxkamada ayaa dib loo dhigay kadib markii haweenayda muslimada ah diiday inay xijaabka iska furto. Waxayna sheegtay inay dacwad kale ka gudbin doonto Garsoorahan.
Wareysi ay Rania El-Alloul siisay telefishinka CBS ee dalka Canada ayey ku sheegtay in ay la yaabtay hab dhaqanka Garsooraha iyo waliba inay dareentay inaysanba xaquuq ku lahayn Canada, hadiiba lagu heysto Xijaabkeeda.
Falkan ayaa waxaa cambaareeyey Xildhibaanada Canada qaarkood oo ku eedeeyey Garsooraha inuu ku tuntay xaquuqda Rania El-Alloul.
Haweenayda Garsooraha oo ay saxaafada la xariireen ayaa diiday inay wax wareysi ah siiso warbaahinta.